Siyakhula isibalo sabazuza ngohlelo lwe EPWP | News24
Siyakhula isibalo sabazuza ngohlelo lwe EPWP
IMIZAMO yokuthuthukiswa kwemiphakathi, ukulwisana nobubha, ukungasebenzi kanye nokungalingani, iyabonakala njengoba loMasipala usukwaze ukudala amathuba omsebenzi alinganiselwa ngaphezu kwezinkulungwane ezimbili (2000) ngaphansi kohlelo lwe Extended Public Works Programme (EPWP).
Uhlelo lwe-EPWP saluqala ngonyaka ka 2015 ngaphansi kweSifunda soGu kanti loluhlelo lusayimpumelelo ekulwisaneni nobubha, ukungasebenzi kanye nokungalingani.
UMasipala kusukela kunyaka wokusungulwa kwaloluhlelo, ususize abantu abangaphezulu kuka-2500 ukuthi bakwazi ukuxosha ikati eziko.
Lesu likaHulumeni waZwelonke liqhamuke nezindlela eziningi zokudala amathuba emisebenzi lapho kuzuza khona intsha, abesifazane abahlala ezindaweni zasemakhaya, abantu besilisa kanye nabantu abakhubazekile.
Kunyaka wezimali ka 2017/18 kudaleke amathuba emisebenzi esikhashana angaphezulu kuka-1400.
Ngawo futhi lonyaka, uMasipala uqale uhlelo oluveze amathuba omsebenzi angamakhulu amathathu anamashumi ayisishiyagalombili nesithupha (386) la kuqashwe khona imbokodo ukuthi ibhekelele ukuhlanzwa kwengqalasizinda yamanzi kwiSifunda soGu.
Ngokohlahlomali lalonyaka wezimali ka 2018/19 oqale ngomhlaka 1 Julayi , siwuMasipala weSifunda soGu, sibeke imali engu-R14 845 000 ukubhekelela izinhlelo zokulwisana nobubha emiphakathini yethu.
Ngaphansi kwaloluhlelo lwe-EPWP, uMasipala uzoqala uhlelo olusha lokuhlanzwa kwemifula, izindawo ezimanzi kanye nemithombo.
Loluhlelo lunikwe isamba esingu-R4 713 000. Siphinde sabeka imali engango-R9 345 495 yokulwisana nobubha ngokusungulwa kwamathuba emisebenzi.
Uhlelo lomama lokuhlanza ingqalasizinda yamanzi lubekelwe imali engu-R4 632 000 ukuqinisekisa ukuqhubeka kwalo.
Uhlelo lwe-EPWP lukwazile ukusiza idlanzana labantu abakwazile ukufunda imisebenzi bathola namathuba okuqashwa ngokugcwele kwizikhungo ezihlukene zikaHulumeni.
Kubalulekile ukuthi ngichaze ukuthi noma ngabe umsebenzi kaMasipala wukuletha intuthuko yamanzi nokuthuthwa kwendle emiphakathini, kodwa kuwumsebenzi waHulumeni wonkana ukuqinisekisa ukuthi ayancipha amazinga obubha nokungasebenzi emiphakathini yethu.
Isikhathi esiningi izinkinga zobumpofu, ukungasebenzi kanye nokungalingani zithinta kakhulu intsha kanye nabantu besifazane okudalwa ukuntuleka kwamakhono.
Siyathembisa siwuMasipala woGu ukuthi sizoqhubeka nokusebenzisana noMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi ukuqinisekisa ukuthi lohlelo luyaqhubeka eminyakeni ezayo futhi amalungu omphakathi ayazuza ngalo.